. * . * . ထာဝရကြယ်စင် . * . * .: June 2012
ပြီးခဲ့တဲ့ အခေါက်တွေက ဘိုကလေးသင်ကျောင်းဘက်တွေသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ဒီသဘောင်္ကို ပြန်စီးဖို့အတွက် ည ၈နာရီလောက်ကို ပြန်ထွက်လာရတယ် .. တကယ်လို့ ဒီသဘောင်္က
၁၀နာရီ ၁၁နာရီလောက်မှ ကပ်တယ် .. ဒီသဘောင်္က မော်ကျွန်းကို ပြန်သွားတယ် .. မော်ကျွန်းကို
ဆက်သွားပြီး မော်ကျွန်းက ကလေးတွေကို ကျွန်တော်တို့ ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးသွားပေးတယ်
.. ဒီမှာ အမြဲတမ်း လာစောင့်ရတယ် .. ရွာကနေ ၈နာရီလောက် ပြန်ထွက်လာပြီး ဒီနေရာမှာ စောင့်ရတယ်
.. ဒီသဘောင်္က ၁၀နာရီ တခါတလေ ၁၁နာရီလောက် ကပ်တယ် .. အချိန်ကတော့ မမှန်ဘူး .. ဒီဆိပ်ကမ်းလေးကလည်း
၁၀နာရီဆို မီးပျက်တယ် .. မီးပျက်ပြီဆို မှောင်သွားရော .. ဒါပေမယ့် ပျော်တော့ ပျော်စရာကြီးပါ
.. သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဆိုတော့ ဒီလိုပဲ .. (Lotus အဖွဲ့မှ)
ဒါကလည်း မော်ကျွန်းမရောက်ခင် ထပ်ရပ်တဲ့ ဆိပ်ကမ်းတခုပါ .. မော်ကျွန်းမြို့ပေါ်က ဘုရားကြီး
အဖွဲ့ဝင်များ တည်းခိုခဲ့သော ဘုန်းကြီးကျောင်းတည်ရှိရာ ဘုရားစေတီဝင်း ကျုံကျိုက်နဲ့ မြင်းကကုန်း နှစ်ခုကို ဖြတ်ပြီး မနက် ၃ ၄ နာရီလောက်မှာ မော်ကျွန်းကို ရောက်ပါတယ် .. အဲဒီအချိန်မှာ ထုံးစံအတိုင်း မီး မလာပါဘူး .. မြို့ခံအကိုတယောက်က အဖွဲ့ဝင်တွေ လာတိုင်း တည်းခိုနေကျ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ခေါ်ဆောင်လာပြီး အဲဒီမှာ နားကြပါတယ် .. မနက် ၁၁နာရီလောက်မှာ စက်လှေတစီးကို ငှားပြီး ၀ါးခယ်မကို ဆက်လက် သွားရောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ် .. ၀ါးခယ်မကို သွားတာကတော့ အဖွဲ့က ကျောင်းစရိတ်ထောက်ပေးထားတဲ့ ညီမလေးတယောက်နဲ့ တွေ့ရဖို့ပါ .. သူကတော့ တက္ကသိုလ် တက်နေပါပြီ .. မနက် ၁၁နာရီလောက်မှာ မြို့ခံအကိုတွေ ကျွေးတဲ့ အစားသောက်တွေ စားပြီး လှေဆိပ်ဆင်းပါတယ် ..ပြီးတော့ ၀ါးခယ်မကို ခရီးဆက်ကြပါတယ် ..
တကယ်တော့ သွားရတဲ့ ခရီးက သိပ်မဝေးပါဘူး .. ဒါပေမယ့် အချိန်မမှန်တာ (မှန်းမရတာ) သိပ်လွယ်လွယ်ကူကူ မရှိလှတာပါ .. ၀ါးခယ်မကိုရောက်ပြီး
အလှူရှင်တဦးမှ ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ ညီမငယ်နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ် .. တခြား ကျောင်းတွေကတော့ ကျောင်းဖွင့်ချိန်မဟုတ်တဲ့အတွက် မရောက်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး .. ဒါပေမယ့် ၂လ တခါ တာဝန်ယူပြီး ကလေးစရိတ်တွေကို သွားပို့ပေးရတဲ့ သူတွေအနေနဲ့ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေ ကြားက တာဝန်ယူပေးနေကြတယ်ဆိုတာကို ကိုယ်တိုင် ၀င်ရောက်ခံစားခဲ့ပါသည်ပေါ့ ..
6/30/2012 03:09:00 AM
ကိုးကွယ်သင့်သော ဘာသာ၌ ရှိရမည့် အင်္ဂါများ
ကိုးကွယ်သင့်သော ဘာသာ၌ ရှိရမည့် အင်္ဂါများ - ၁။ အပြစ်ကင်းရမယ်၊
၂။ ကောင်းကျိုးရှိရမယ်၊ ၃။ ပညာရှိတို့ ကဲ့ရဲ့မှုမှ လွတ်ကင်းရမယ်၊
၄။ အခြားဘာသာကို ဖျက်ဆီးခြင်း၊ ရှုတ်ချခြင်း ကင်းရမယ်၊
၅။ အခြားဘာသာများ တရားသဖြင့် တိုးတက်ကြီးပွားအောင် ပြုလုပ်ခြင်းကို ခွင့်ပြုရမယ်၊
၆။ မကောင်းမှုကို မပြုမိအောင် စောင့်စည်းပေးနိုင်ရမယ်၊
၇။ စိတ်ကို ကိလေသာမှ စင်ကြယ်အောင် ညွှန်ပြနိုင်စွမ်း ရှိရမယ်။
အရှင်ဇ၀န (အရှုံးမရှိသော ဒဿနစာအုပ်မှ)
အားပါးတရ ပြုံးတယ် ...။
အားကိုးမှုတွေ ရောပြွန်းလို့ ...။
မျက်ရည် ကျတယ် ...။
ရှိုက်ကြီးတငင် ကျတယ် ...။
အံ့သြ၀မ်းသာခြင်းတွေ ရောပြွန်းလို့ ...။
နှုတ်ခမ်းမှာ အပြုံးတွေ ခိုတွဲ
နှလုံးသားမှာ ခံစားချက်တွေ ချိတ်ဆွဲ
ရင်တခုလုံး အပျော်တွေ ကူးလို့ ...။
မြင်လိုက်ရတဲ့ လူတွေရဲ့ ၀မ်းမြောက် ၀မ်းသာမျက်နှာ
အားလုံး .. မျက်ဝန်းတွေတောင် လိုက်ပြုံးလို့ ...။
6/20/2012 11:41:00 PM
စိတ်တွေ အတော်လေးကို လေးလံထိုင်းမှိုင်းနေပါတယ် .. အားလုံးလည်း စိတ်တွေကြည်လင်နိုင်ကြမယ် မထင်ဘူး .. ဒေါသတွေထွက်လိုက် စိတ်မကောင်းတွေဖြစ်လိုက် .. အဝေးကလူတွေတောင် ခုလောက် စိတ်မကြည်လင်နိုင်ရင် နီးနီးနားနား ဒုက္ခခံနေရသူတွေ ဘယ်လောက်များစိတ်ဒုက္ခများလိုက်မလဲ .. ဘယ်လောက်နောက်ကျောမလုံဖြစ်နေလိမ့်မလဲ .. ကိုယ်တွေ ကွန်ပျူတာရှေ့မှာ အေးရာအေးကြောင်းထိုင် Facebook လေးဝင်လိုက် ဒေါသတွေထွက်လိုက် ပွားလိုက် ဆဲလိုက် ဆိုလိုက် .. တခြားနေရာတွေမှာ စိုးရိမ်ကြောက်လန့်မှုတွေနဲ့ မအိပ်နိုင် မပျော်နိုင် .. မတရားလိုက်တဲ့ လောကကြီး ..
ဘ၀တလျှောက်လုံးမှာ မျက်မြင်ဒိဌ ကိုယ့်ရှေ့သွေးသံတရဲရဲဖြစ်နေပုံတွေ ကိုယ့်ရှေ့မှာ လူတယောက် အသက်ငင်နေပုံတွေ တကြိမ်တခါပဲ မြင်ဘူးပါသေးတယ် .. အဲဒီအဖြစ်ကတော့ မျက်စိထဲကကို မထွက်နိုင်သေးတာ .. တရက် အစ်မနဲ့ ရွှေတိဂုံဘုရားက အပြန် ကားလမ်းအကူး (မှတ်တိုင်က ရေခဲဆိုင်လို့ ခေါ်လားမသိ) မှာ ကိုယ်တွေလမ်းကူးလာတုန်း မြင်လိုက်ရတာက အန်တီကြီးတယောက် လမ်းပေါ်မှာ မတ်တပ်ကြီးနဲ့ မလှုပ်မယှက် .. နောက် ကြည့်နေရင်း ထမိန်ကြားက သွေးတပွက်ပွက်ကျ သွေးနဲ့အတူ အသားစိုင်လို အဖြူဖတ်တွေပါ ပါလာတာမြင်ရင်း ကိုယ့်စိတ်တွေ ကြက်သေ သေနေခဲ့တာ .. ဘာမှလည်းမလုပ်တတ် ထိတ်လန့်နေခဲ့တာ .. ကြည့်နေရင်း အဲဒီအန်တီကြီး လမ်းပေါ်ပစ်လဲသွားခဲ့တယ် .. ဘေးနားက အဲဒီအန်တီကြီးရဲ့ သမီးလုပ်သူက အမေ အမေ .. အမေ့ကို ကယ်ပါဦး ကူကြပါဦးနဲ့ သွေးရူးသွေးတန်း .. လူတွေဝိုင်းနေပေမယ့် ကိုယ်ထိလက်ရောက် မလာကြသေး .. ချက်ချင်းဆိုတော့ လူတွေလည်း အံ့သြနေကြ ထိတ်လန့်နေကြပုံပါ .. ကိုယ်ကတော့ ဘာမှန်းမသိ ကြောက်နေတယ် .. လန့်နေတယ် .. တဆက်တည်း ပျို့ချင် အန်ချင်စိတ်တွေပါ ပေါက်လာတယ် .. နောက်တော့ လူတွေ ကူပြီး ကားတွေတား .. ကားတွေက မရပ်ချင်ကြသလို ရပ်လည်း မရပ်ကြဘူး .. နောက်ဆုံး အဖြူစိမ်းနဲ့ ကြံခိုင်ရေးထင်ပါတယ် အဖွဲ့ဝင် အနည်းအကျဉ်းရောက်လာပြီး ကားကူတားပေး .. နောက် တက်စ်စီတစီးချောမိလို့ အဲဒီတက်စ်စီနဲ့ ဆေးရုံခေါ်သွားကြတယ် .. ဒါ ပထမဆုံး အပြင်မှာ မြင်ဘူးတဲ့ သွေးထွက်သံယိုမြင်ကွင်းပါပဲ ..
ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ မေးကြည့်တော့ ဘတ်စ်ပေါ်က အဆင်း ကားကလည်း မောင်းအထွက် အဲဒီအဒေါ်ကြီး ပြုတ်ကျပြီးတော့ ထွက်နေတဲ့ သံပြားက တံခေါက်ကွေးကို ကပ်ဖြတ်လိုက်သလိုဖြစ်တာတဲ့ .. ကိုယ်တိုင်မကြည့်ရဲတော့ မမြင်ခဲ့ဘူး အစ်မပြောတာတော့ ပြတ်လုပြတ်ခင်ဖြစ်နေတယ်တဲ့လေ .. ၃ပုံ ၂ပုံလောက်ကို ပြတ်နေတယ်တဲ့ .. တရားခံဖြစ်တဲ့ ကားမောင်းသူနဲ့ နောက်လိုက်ကတော့ ထွက်ပြေးသွားတယ် ..
နောက်ပိုင်း ၂၀၀၇မှာ အပြင်မှာ မမြင်တွေ့ပေမယ့် အွန်လိုင်းမှာတွေ့ရတဲ့ မြင်ကွင်းတွေကြောင့် အဓိကရုန်းကို ကြောက်လန့်ခဲ့တယ် .. မတရားမှုတွေကို ရွံမုန်းခဲ့တယ် .. မတရားလုပ်တဲ့လူတွေကို စက်ဆုတ်တယ် ..
နာဂစ်မှာ တာဝန်မဲ့တဲ့သူတွေကြောင့် အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေ ဆုံးရှုံးရမှုတွေကို အင်တာနက်မှာမြင်တော့ ကိုယ့်အမျိုးအဆွေတယောက်မှ မပါသည့်တိုင် ရင်ထဲတဆစ်ဆစ်နာပြီး မျက်ရည်ကျရတယ် ..
ဒါတင်ဘယ်ကမလဲ .. အစ်မတွေကပြောတယ် .. ၈၈ တုန်းကဆိုရင်လေ ဆိုပြီးတော့ .. မမြင်ဘူးပဲ နားနဲ့ကြားရတဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့တင်ကို ကြောက်လန့်လွန်းလို့ မတွေးချင်လောက် သတိမရချင်လောက်အောင်ပါပဲ .. ဘာတဲ့ .. တယောက်ကိုတယောက် စွပ်စွဲတယ် .. ဆေးခပ်တယ် အဆိပ်ခပ်တယ်နဲ့ .. သူ့နယ်မြေ ကိုယ့်နယ်မြေသတ်မှတ် .. နယ်ကျော်လာရင် ခေါင်းဖြတ်သတ် .. ဖြတ်ထားတဲ့ခေါင်းတွေကို စီထားပြီး လူမြင်အောင်ပြ .. အဲဒီအချိန် လူတွေဘီလူးစီးနေကြသလားပဲ တဲ့ .. တီဗီမှာဆို ပြတယ် .. ဓါးက တုံးတုံးနဲ့ လူတယောက်ရဲ့ လည်ပင်းကို မပြတ်ပြတ်အောင် ဖြတ်နေတာတဲ့ .. အဲဒီမူဗီတွေ ရှိတယ်ပြောတယ် .. မကြည့်ချင် မကြည့်ရက် မကြည့်လည်း မကြည့်ရဲလို့ မကြည့်ဘူး ..
ဆက်မရေးချင်တော့ဘူး .. အဲလိုအဖြစ်မျိုးတွေ မြန်မာပြည်ကြီးမှာ ထပ်မဖြစ်ဖို့ ဆုတောင်းတယ် .. မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားတွေကို စိတ်အေးချမ်းသာ လူတန်းစေ့နေနိုင်စေချင်တယ် .. ဘာကြောင့် ဘယ်လို အသက်ဆုံးရှုံးသွားပါတယ်ဆို သိသိ မသိသိ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ် .. လူတွေရဲ့အသက်ပါ .. အလဟသတ် အဓိပ္ပါယ်မရှိ ဆုံးရှုံးနေရတာတွေ မတန်လိုက်တာ .. လူတွေဘာလို့ ဒီလောက် လောဘ ဒေါသ မောဟတွေ ကြီးနေကြတာလဲ .. တနေ့ထမင်းသုံးနပ်အပြင် ဘယ်လောက် များများပိုစားနိုင်မှာလဲ .. သေရင် အ၀တ်တထည်ကိုယ်တခုအပြင် ဘာတွေများ ပိုပြီးထပ်သယ်သွားနိုင်မှာလဲ .. အဲဒီအ၀တ်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတောင် မီးလောင်တိုက်သွင်းခံရမှာ .. ကျေးဇူးပြုပြီး တတ်နိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များ မြန်မာနိုင်ငံကို ဒါ့ထက်ပို အထိမနာအောင် ကာကွယ်ပေးကြပါ .. မြန်မာနိုင်ငံကြီး မတရားမှုတွေကြားမှာ လုံးပါးပါးနေတာ ကြာလှပြီ .. အခုဖြစ်နေတဲ့ အရေးအခင်းတွေ အမှန်အကန်ဖြစ်တာဆိုရင်လည်း ထိထိရောက်ရောက် အဆုံးသတ်ပေးကြပါ .. လုပ်ကြံဇာတ်ခင်းနေတယ်ဆိုရင်လည်း ကိုယ်ချင်းစာစိတ် မျှတတဲ့စိတ်လေးဝင်ပြီး ကျေကျေလည်လည် အဆုံးသတ်ပေးကြပါ .. လေလှိုင်းပေါ်ကနေလည်း လူမသတ်ကြပါနဲ့ .. ရှုပ်နေတာတွေ ပိုရှုပ်ထွေးအောင် မလုပ်ကြပါနဲ့ .. စကားတွေ မက်ဆေ့တွေ ဖောင်းပွပြီး ယုန်ထင်ကြောင်ထင်ဖြစ်အောင်လည်း မလုပ်ကြပါနဲ့ .. အားလုံးပဲ ကိုယ့်စည်းနဲ့ကိုယ် ထိန်းသိမ်းနိုင်ကြပါစေ ..
6/08/2012 12:59:00 AM
သူတို့လေးတွေနဲ့ စကားပြောကြည့်တော့ ရောက်ခါစက မိဘနဲ့ ခွဲပြီးလာကြရတဲ့အတွက် ၀မ်းနည်းကြတယ် ငိုကြတယ် .. နောက်ပိုင်းတော့ ရွယ်တူလေးတွေ အစ်မ ညီမတွေလိုဖြစ်ပြီး ပျော်သွားပါတယ် တဲ့ .. ဘယ်လိုပဲ မိဘနဲ့ ခွဲနေရတယ်ဆိုပေမယ့် ချစ်ခင်ဂရုစိုက်မယ့် အစ်မ ညီမနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရှိနေလို့ သူတို့တွေ ပျော်ကြပါလိမ့်မယ် .. ကျောင်းမှာ အတန်းစာအပြင် ဘုရားစာကိုပါ တွဲဖက်သင်ကြားပါတယ် .. အခွင့်အခါသင့်ခဲ့ရင်လည်း အဲဒီကျောင်းလေးဆီ ရောက်အောင် သွားကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ် .. အဲဒီကျောင်းလေးမှာ ဆူဆူညံညံ ကစားသံတွေ စာအံသံတွေ ကြားရပါမယ် .. ကလေးတွေရဲ့ မတူညီတဲ့ ဘ၀ဖြတ်သန်းခဲ့ရပုံတွေ ကြားသိရပါမယ် ..